CALEENTA WAA SHARAXAADDA NOOCYADA IYO NOOCYADA CAANKA AH EE "ROOBKA DAHABKA" - SOOSAARKA DALAGGA
Dhab ahaantii, dad badan ayaa si isdaba joog ah u arkay geed qurux badan oo aan caadi ahayn oo leh buro dheer oo huruud ah - tani waa cufur, ama roob dahab ah. In our article waxaan ku siin doonaa sharaxaad ka mid ah noocyada ugu muhiimsan ee warshad this iyo kuu sheegi sida loo beero iyo fuliyaan daryeelka ay.
Cedar waa dhir diiran, dhererkeedu waa 2 mitir. 30-cm burushyada huruudda ah waxay u dhexeeyaan caleemaha waxayna abuuraan muuqaal u eg sida roobka dahabka ah.
Waa muhiim! Baubnik waa warshad sun ah, sidaa daraadeed waa inaadan beeran geed geedka haddii aad leedahay caruur yar. Necbada necada ah ee laga helo inflorescences ama cunista digirta macaan, way ismaandheen karaan. Waxaa jirey kiisas markii suntu ay keentay wadnaha oo aan shaqeynin.
Marmarka qaarkood dhirta waxaa laga helaa qaab ah geed - taas oo ay tahay dhererka ayaa gaari kara 7 mitir. Koritaanka bovovnika wuxuu dhacaa si deg deg ah, oo geedka wuxuu bilaabmaa inuu bararoobo 3-5 sano ka dib markii laga beerto. Waxay leedahay difaaca barafka sare wuxuuna u adkeysan karaa heerkulka ilaa -25 ° C.
Burushka huruudda ah waxay leeyihiin dareen jilicsan. Wakhtiga ubaxu wuxuu u bilaabmayaa si isku mid ah ubaxyada caleemaha (badhtamaha May).
Goobta qorraxda, dabaylaha aan lahayn iyo dabacsan, bacriminta, carrada cagaaran ee leh bullaacad fiican ayaa ku habboon roobka dahabka ah. Dhirta waxay u muuqataa mid aad u fiican cawska cagaaran ama kaymaha waaweyn. Dhirta roobka dahabiga ah laguma talin in lagu beero warshad adag, maaddaama la'aanta iftiinka uu keenayo "fidinta" geedka iyo ubaxa daciifka ah.
Noocyada iyo Beelaha
Waxaa jira 2 nooc oo ah bobovnika oo kaliya iyo 1 geedka miraha. Ka fikir faahfaahin dheeraad ah mid kasta.
Dhirta kale ee sunta ah, sida geedka aconite, wolfberry, jimicsiga yurub, yaryar berri ah, dabeecad, alocasia, rue, burcadka, ayaa sidoo kale soo jiidanaya dareenkooda. Sidaa darteed, marka ay sii kordheyso waa inay taxadaraan.
Noocaanku wuxuu leeyahay dulqaad wanaagsan. Geedka dhererkiisu dheer yahay, wuxuu gaari karaa 10 mitir. Waxay leedahay caleenta cagaaran ee cagaaran, ubax yar oo aan lahayn aromas, digir qaawan. Ubax ka mid ah caleemaha alpine waa wax yar ka dib noocyada kale. Dhererka burushyada waxay noqon karaan ilaa 45 cm.
Ma taqaanaa? Inkastoo xaqiiqda ah in buunshuhu uu yahay sun, waa dhir macaan oo wanaagsan, waxaana inta badan soo booqda shinni, halka ay ku haraan ammaan iyo cod.
Wadanka noocyada noocyada ah waa Koonfur-Bartamaha Yurub, Talyaaniga, Balkaan Galbeedka. Caleemaha iftiinka iftiinka, waxoogaa kor loo qaado, waxay leeyihiin qaab saddex-gees ah, dhererkoodu waa ilaa 9 cm.
Alpine almond wuxuu leeyahay iska caabin ah baraf sare, waxay ku joogtaa xitaa kan ugu daran ee soo socda.
Noocyadaasi waa kuwa ugu caansan. Dhirta geedka ayaa ka badan 7 mitir. Diiran ee noocyada noocan ah lagu taliyey in lagu beeray sidii hal geedka - Tani waxay u oggolaanaysaa in taajka si wanaagsan loo sameeyo oo uumaysto.
Caan ka mid ah noocyada ayaa bilaabay inay si dhakhso ah u koraan markii loo keenay Ruushka ka yimid Caucasus qarnigii XIX. Waa warshad buur ah oo u diirisa si fiican u digaag. Muuqaalka geedka waa joogitaanka caleemo leh qaabab kala duwan. Inflorescences waxay leedahay caraf udgoon, caraf udgoon. Cannabis Anobirolist waxaa loo isticmaalaa marar badan noocyada kale ee naqshadaha muuqaalka: waxay ku qurxiyaan beeraha iyo beeraha.
Noocadani waa giig laga helay iyadoo la marayo laba xabbadood oo hore. Isaga dhererkoodu waa yar yahay - kaliya 1 mitir, laakiin caleemuhu way ka dheer yihiin - illaa 50 cm. Muuqaalka hybrid wuxuu leeyahay caraf udgoon ee ubaxyada. Si ka duwan kuwa dhiggooda ah, biyaha ayaa si aan fiicnayn u liitaa heerkulkiisu hooseeyo, ma leh wax iska caabin ah dhaxan. Taasi waa sababta ay u fiican tahay in la beero geedka aagga leh jawi diiran. Ubaxa noocaani wuxuu dhacaa laba jeer xilli.
Hadda waxaad taqaanid waxa ah geed cagaarsho ah, noocyada dhirta ayaa jira, waxaadna dooran kartaa nooca ugu haboon ee lagu beerayo goobta.
Xeerarka aasaasiga ah ee ku habboon iyo daryeelka
Talaabada koowaad waa in la doorto goobta saxda ah ee beerto. Leaf jecel yahay meelaha qorraxdu ka baxdo, oo leh dhulalka kuleylka kuleylka leh. Ka hor inta aan la beeri, waxaa lagu talinayaa in la hubiyo dheecaan wanaagsan, hubi in lime uu joogo xayndaabka ciidda - tani waxay xaqiijin doontaa koritaanka degdegga ah.
Waa muhiim! Xilliga jiilaalka, iska hubi inaad barafka ka saarto laanta geedka dahabka ah. Under miisaankooda, waxay jebiyaan, iyo badbaadiyo dhirta ma guulaysan doono.
Haddii aad go'aansato inaad geedka geed abuurto, waxaad ku iibsan kartaa dukaamo khaas ah. Waqtiga ugu wanaagsan ee beerto waa dhamaadka dayrta - bilowga jiilaalka.
Wixii beerashada bobster ah ee abuurka ah waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo baqdin. Marka la beero abuurid, daaweynta kiciyaha ayaa lagu talinayaa koritaanka xidid wanaagsan: "Kornevin", "Kornerost", "Chunky".
Beeridda abuurka, fiiri qodobbada soo socda:
Nadaafad, carrada hore loo nadiifiyey ayaa ku habboon beerto.
Seeds waxay u baahan yihiin in la xoojiyo dhulka 2 ilaa 3 cm.
Beeraha doogta, hubi inaad sameyso waraabin dhexdhexaad ah.
Ku dabool foorno weel si ay u fuliso.
Cagaarka xilliga kuleylka wuxuu ku dhici doonaa dhammaan xagaaga, dhererka geedka wuxuu gaari doonaa ugu yaraan 0.5 mitir.
Ka qaad jar-jarijiga si loo hubiyo in hawo-mareenka loo wareejiyo dhirta.
Si aad u beerato geedka dhul furan waxa fiican in la doorto bisha koowaad ee dayrta - Sebtember.
Waxaa jira hab kale oo beerto - dukaanka ama suuqa aad ka iibsan kartaa digaagga dhalinyarada ah. Marka hore waxay u baahan yihiin inay ku soo galaan goobta diyaarka ah. Tani waa habka ugu haboon, maadaama aadan ku sugnaan doonin mudada dheer ee abuurka ah. Waxaa jira hal daqiiqo oo qurux badan - sanadka ugu horeeya waxaad ka heli kartaa ubax qurux badan.
Diyaarso dalool balaadhan, cabirkan waa inuu noqdaa 2 jeer mugga dhererka gaadiidka leh warshad. Ku rid buunka daloolka, toosi xididdada oo si dabacsan u dabooli dhulka iyo compost, geedka giishada ku dheji qaabka ul.
Ka dib markii warshadda lagu beeray dhul furan, bilawga jiilaalka waa in la daboolaa. Si aad u hesho bogovnik wanaagsan, marka aad soo iibsanayso, waxaad doorbideysaa koobiyada yar.
Waxaa muhiim ah in si haboon loo daryeelo feejignaanta. Waxa uu yahay mid aad u jilicsan oo si xanaaq leh uga jawaabaya isbadalada xaaladaha. Waxaanu kuugu soo bandhigi doonaa si aad u barato hawlaha ugu muhiimsan ee daryeelka geedaha.
Ma taqaanaa? Qoryaha bobovnika ayaa la qiimeeyay muddo dheer: waxaa loo isticmaalay sidii wax loo sii wadi karo qalabka muusikada. Iyo in waqtigeena, alaabta bovobnik waxaa lagu qiimeeyaa aad u sare.
Waraabinta. Warshadu uma baahna waraabin badan oo badan. Ciidda ka badan ciidda ayaa hubaal ah in ay horseeddo kallanaato root, waxay gacan ka geysan doontaa horumarinta fangaska iyo jeermiska.
Dharka ugu sareeya. Si loo siiyo geed leh nafaqooyin muhiim ah, waa lagama maarmaan in la bacrimiyo iyada oo leh humus, compost iyo lime. Hubi in aysidhka ee ciidda aan la kordhin. Dharka ugu sareeya waxaa la sameeyaa 2 sano ka dib marka la beero sannad kasta.
Bacriminta. Waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo superphosphates Bacriminta. Bacriminta potassium sidoo kale waa mid waxtar leh - waxaa si fiican loo isticmaalaa marka geedka waa in ubaxyada.
Ilaalinta. Aad bay muhiim u tahay in laga ilaaliyo roobka dahabka ah ee ka yimaada dabaylaha qoyan iyo qabowga. Haddii aan la samayn, Dabweb wuxuu lumin doonaa midabkiisa mana ku farxi doono dhowr sano. Marka hore geedka ku dhex beeri aag aan lahayn, ama, haddii kale, ku beer geedo kale oo dabiici ah oo ka ilaalin kara cayayaanka xoogagga dabaysha.
Cayayaanka. Roob khafiif ah ayaa ka hortagaya cayayaanka, way dhif u yihiin.
Gooyo. Wakhti ahaan, si loo siiyo taajka foomka, waxaa lagama maarmaan ah in lafdhabar laamaha. Fikrad ahaan habraacaanku wuxuu ku haboon yahay xagaaga dambe ilaa jiilaalka hore.
Haddii aad si fiican u daryeeshid geedka, geedka roobka dahabka ah ayaa si joogto ah ugu farxi doona ubax aan caadi ahayn. Qalbiggu wuxuu qurxin doonaa goob kasta oo ka dhigaa janno dhab ah.